[တရားဝင်] dr.fone - iOS ကို System ကို Recovery ကို: ပုံမှန်မှ iOS ကို Fix
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို System ကို Recovery ကို
သင့် iOS စနစ်ကဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအိမ်မှာပြုပြင်
စသည်တို့ကို recovery mode ကို, အဖြူရောင်က Apple လိုဂို, အနက်ရောင် Screen, က start အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောကို iOS စနစ်ကဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အတူ fix
မှာအားလုံးပုံမှန်မရှိ, data ကိုအရှုံးမှသင့် iOS သာလျှင် fix ။
iPhone, iPad နှင့် iPod touch နဲ့မော်ဒယ်များအားလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်။
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို System ကို Recovery ကိုသငျသညျအိမျမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ပုံမှန်ပြန်သင့် iOS fix ပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ iPhone, iPad, recovery mode ကိုသို့မဟုတ်အဖြူ Apple ကလိုဂိုအတွက်နဲ့တူသောအရာတို့ကိုမှီဝဲတဲ့အခါ, သင့်ရဲ့ iPhone / iPad အတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူ၏အထွေထွေနည်းလမ်းတခု iTunes ကို restore ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုမကျင့်လျှင်သင် backup တစ်ခုနှင့်ကြေကွဲဖွယ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါလျှင်ဂရိတ်။ iOS အတွက် System ကို Recovery ကိုထွက်လာ - dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလွယ်လွယ်ကူကူက iOS စနစ်ကပြဿနာများကိုမဆိုမျိုးကို fix ပြန်သာမန်ရန်သင့် device ကိုရနိုင်သည်။ အများအားဖြင့်အရေးကြီး, သင်ထက်နည်း 10 မိနစ်အတွင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ကကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး, မည်သည့်ဒေတာများဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်။
အဘယ်ကြောင့် iOS ကို System ကို Recovery ကို?
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကို System ကို Recovery ကိုအများအပြားဘုံကးအဘို့ကို iOS ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်သင့်အားနိုင်ပါတယ်။
iPhone / iPad ကို recovery mode ကိုကွင်းဆက်သို့မဟုတ် iTunes လိုဂိုမှာညပ်မိ။
iPhone / iPad ကို DFU mode ကိုထဲကမရနိုငျပါ။
iPhone / iPad အဖြူ Apple ကလိုဂိုမျက်နှာပြင် / သေခြင်း၏အဖြူရောင်မျက်နှာပြင်သို့လှည့်။
iPhone / iPad ကိုအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်, အနီသို့မဟုတ်အပြာရောင်ဖန်သားပြင်ဖြစ်လာသည်။
iPhone / iPad ကိုအတောမသတ် Restart ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။
iPhone / iPad ကိုအေးခဲခြင်းနှင့်လုံးကိုတုံ့ပြန်ပါဘူးပေါ်လာသည်။
iPhone / iPad ကိုချွတ်ပါဝါမှသော့ဖွင့်သို့မဟုတ်ဆလိုက်မှလျှောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
iPhone / iPad ကို Apple လိုဂိုအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲစောင့်ရှောက်လော့။
မူလစာမျက်နှာမှာပုံမှန်မှ iOS ကို fix
သငျသညျအစားပိုက်ဆံတစည်းနှင့်အတူနှင့်သင့်ရဲ့ privacy ၏အန္တရာယ်မှာစတိုးဆိုင်ပြုပြင်ဖို့ကပို့, ကိုယ့်ကိုယ်အားဖြင့်သင့်ကို iOS ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။
အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများကနေ iOS ကို System ကို Recover
အနက်ရောင် Screen, recovery mode ကို, သေမင်း၏အဖြူရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်ပိုပြီးအနေဖြင့်သာမန်ရန်သင့်ကို iOS ကို fix ။
ဒေတာများဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲပုံမှန်မှ iOS ကို fix
iTunes ကိုသို့မဟုတ် iCoud restore မတူဘဲ, ဒီက iOS စနစ်ကပြန်လည်နာလန်ထူဆော့ဖ်ဝဲကိုသင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်မဆိုဒေတာပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ပြန်ပုံမှန်ရရှိသွားတဲ့အခါ။ အရာအားလုံးနေဆဲဖြစ်သည်။
iPhone, iPad နှင့် iPod touch နဲ့အတူကိုအလွန်အလုပ်မလုပ်
သငျသညျနောက်ဆုံးပေါ် iPhone မှာ 7, အိုင်ပက် Pro ကို, ဒါမှမဟုတ်အဟောင်းက iPhone 4, iPad နဲ့ 1 ကိုအသုံးပြုပြီးဖွင့်နေပါစေ, ဒီ iPhone ကိုဒေတာဆယ်တင်ရေး iPhone, iPad နှင့် iPod touch နဲ့မော်ဒယ်များအားလုံးနှင့်အပြည့်အဝလိုက်ဖက်သည်။
ဒါဟာပြောင်းလဲမှုကိုခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ဒေတာပေါက်ကြား, ဖြစ်စေသင့်ရဲ့ device ကို jailbreak လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကမအားလုံးပြန်သာမန်ဖို့သင့်ကျိုးပဲ့ device ကိုရရှိရန်ဖြစ်ပါတယ်။
iTunes ကိုမှနှိုင်းယှဉ် dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို အသုံးပြု. သင့် iOS စနစ်ကပြဿနာ fix နိုင်သောနည်းလမ်းများ restore သို့မဟုတ်အခြား - iOS ကို System ကို Recovery ကိုသင့်ရဲ့ iPhone, iPad နဲ့ iPod touch တွင်ဒေတာနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုဆုံးရှုံးမည့်အန္တရာယ်မှာသငျသညျထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသင့်ရဲ့ device ကိုချိတ်ဆက်ရတဲ့နှင့်အနည်းငယ်ကလစ်နှင့်အတူရှေ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါအရာအားလုံးမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြုရပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ဘယ်အရာကမှပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိရိယာတန်ဆာပလာ dr.fone သောမှော်ဖြစ်ပါသည် - iOS ကို System ကို Recovery ကိုပါဘူး။
နောက်ကျောပုံမှန်ရရန်သင့်ကို iOS ကိစ္စရပ်များကိုဖြေရှင်းပါ။
ဘေးကင်းလုံခြုံ Recovery ကို
iOS အတွက် System ကို Recovery ကိုအားလုံးက iOS ဖုန်းများအတွက်အလုပ်လုပ်
အိုင်ပက် Pro ကို, အိုင်ပက်လေတပ်, iPad mini က, အိုင်ပက်
စဉ်အကောင်းဆုံး PRODUCT သည်
dr.fone ငါ၏အဖျက်ပစ်ဓာတ်ပုံများ recover လုပ်ဖို့ငါ့ကိုကူညီပေးသည်။ ဒီပရိုဂရမ်ဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုဖျက်ပစ်လျှင်ဤအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုရန်လူတိုင်းဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
N. ဆိုးကာ, အိုင်ပက်
သငျသညျ stupidly သင်လိုအပ်သောအရာတို့ကိုဖျက်ပစ်တဲ့အခါမှာတချို့အများကြီးအထောက်အကူပြုကြောင်းအံ့သြဖွယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်
ယောရှုသည် Brenne, iOS ကို
မရဏ၏အဖြူရောင်မျက်နှာပြင် Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
သင်ကသင့်ရဲ့ iPhone ကို Upgrade တဲ့အခါမှာမှားယွင်းနေသည်9Fix ရန်အပြည့်အဝ Solutions
တွေ့ဆုံ iPhone ကိုမှားယွင်းနေသည် 14? ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်အလွယ်တကူ Fixed Get!
"iTunes ကိုမှ Connect ကို" ပေါ်တွင်သောင်တင် iPhone ကို Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
အမှား 53 Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
iPhone6မှာအတူဗိုလ်မှူးပြဿနာများနှင့်မည်သို့သူတို့ကို Fix ဖို့
iOS က Update ကိုစဉ်အတွင်း iPhone ကိုမှားယွင်းနေသည် 4013/4014 Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
iPhone ကိုမှားယွင်းနေသည် 3194 Fix ဖို့အပြည့်အဝ Solutions
ငါက iPhone မှားယွင်းနေသည် 29 ကိုဘယ်လို Fix Do
iPhone, iPad နှင့် iPod touch နဲ့ထံမှစသည်တို့ကိုပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်အဆက်အသွယ်များ, မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓာတ်ပုံများ, မှတ်စုများ, Recover ။
Backup ကိုနှင့် / စက်ကိရိယာမှပေါ်မဆိုကို item restore, သင်၏ကွန်ပျူတာဖို့ backup လုပ်ထားဆီကနေသင်အလိုရှိသောအရာကိုတင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။
iPhone / iPad / iPod touch / Android ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာများမှ backup လုပ်ထား / တင်ပို့မှုက iOS ကို WhatsApp ကိုလွှဲပြောင်းပါ။